Nkpọrọ ụkwụ na ntan; Ụdị okwu dị mkpa ka ị nwee ihe ịga nke ọma n'oge Mgbasa Ozi SEO
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ọrụ nke Semalt Ọrụ Ntanetị, kọwakwuru na nke a n'isiokwu 3 ụdị isiokwu ndị ị ga - emerịrị n'ime mgbasa ozi SEO .
Mpempe akwụkwọ Grik
N'otu aka ahụ, dị ka isiokwu ahụ na-atụ aro ndị a bụ ụdị ọnụọgụ, usoro akọwaghị na ndị ọrụ weebụ 'chọrọ. A ga-ele okwu ndị dị ka "Ngwaọrụ Ntanetị" dị ka okwu mkpụrụ ndụ - konditsioneeri täitmine. Mgbe ị na-emepụta usoro ọchụchọ ọchụchọ, anyị na-ezere okwu ndị dị otú a dịka ha na-elekwasị anya na-ezughị ezu na ọdịnaya dị na weebụsaịtị. N'ọnọdụ ọ bụla, na ohere ị nwere ike ịkwado maka okwu ọnụọgụ abụọ gị na saịtị kwesịrị iji nweta ọnụ ahịa nke ndị ahịa site na isiokwu ahụ. Mgbanwe maka okwu ahụ nwere ike ịdị ntakịrị dị ka onye ahịa na-aga na ebe nrụọrụ weebụ gị maka isiokwu zuru ezu na-enweghị isi na ọ dịghị ihe dị oke mkpa.
N'ọnọdụ ọ bụla, ị na-agba ọsọ ahịa AdWords..Ọ dị mma itinye ụfọdụ n'ime mkpụrụ okwu ndị a dị iche iche iji hụ na a na-agwa ọhụụ ọ bụla. N'ihi echiche a na-echebara echiche nke mkpụrụ okwu ọnyà, ebubo kwa pịa ga-abụkwu. Na ohere na mgbasa ozi na-adaba nke ọma ma nweta ezigbo nkwalite site na Google, ezigbo okporo ụzọ nwere ike ịgbaso. N'otu aka ahụ, dị ka ịchọta ọchụchọ, ozugbo onye ahịa na-enweta saịtị ahụ site na nyocha ọchụchọ ahụ, ọ ga-abụrịrị na mgbanwe ndị a ga-adị ala maka isiokwu a.
Usoro ọnụọgụ bụ nhọrọ siri oke ịchọrọ. M na-ahọrọ ịnọgide na-enwe nchebe dịpụrụ adịpụ n'ebe ha nọ ọ gwụla ma m nwere saịtị ziri ezi na ọdịnaya kwesịrị ekwesị na nkwado ego dị na ya.
Nkọwa okwu gbasara okwu
Usoro okwu egwuregwu buru ibu bụ etiti nke njikarịcha weebụsaịtị. Ịga n'ihu maka mkpokọta isiokwu bara uru ga-enye okporo ụzọ dị oke ọnụ na njedebe dị nta. Onye na-achọta egwuregwu zuru ezu nwere ọdịnaya dị iche iche ha na-agbaso ma na-aga n'ihu maka ụdị okwu a ga-enye ụfọdụ mgbanwe.
Nkeji edemede a bụ ihe kwesịrị ekwesị n'etiti ihe ndị a na-atụ aro maka kpọmkwem pịa site ọnụego na mpi / ọnụ. Ebe nrụọrụ weebụ na-adabere na akụkụ kachasị nke ọdịnaya gburugburu ụdị okwu a kwesịrị ime ihe dị mma.
Mmasị Ogologo Oge
Okwu mkpirisi ọdụ ogologo bụ ihe ikpeazụ iji lee anya. Dịka ọmụmaatụ, "olee otu m ga - esi mepee oghere na igwefoto T3I dijitalụ m" ka a ga - ele anya dịka ọdụ okwu ogologo. Ha agaghị abụ ndị ọkwọ ụgbọ okporo ígwè kasị ukwuu na ebe nrụọrụ weebụ gị, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kwadoro okwu maka ogologo okwu ị ga-enweta ọrụ n'ihi ọdịdị ya na obere mpi.